Shoutcart: Ụzọ Dị Mfe Ịzụta mkpu n'aka Social Media Influencers | Martech Zone
Ọwa dijitalụ na-aga n'ihu na-eto ngwa ngwa, ihe ịma aka nye ndị na-ere ahịa n'ebe niile ka ha na-ekpebi ihe ha ga-akwalite na ebe ha ga-akwalite ngwaahịa na ọrụ ha n'ịntanetị. Ka ị na-achọ iru ndị na-ege ntị ọhụrụ, enwere ọwa dijitalụ ọdịnala dị ka mbipụta ụlọ ọrụ na nsonaazụ ọchụchọ… mana enwerekwa ndị na-egbu egbu.
Ahịa ndị na-emetụta mmetụta na-aga n'ihu na-eto eto na ewu ewu n'ihi na ndị na-eme ihe ejiriwo nlezianya tolite ma chịkọta ndị na-ege ha ntị na ndị na-eso ụzọ ha ka oge na-aga. Ndị na-ege ha ntị etoola ntụkwasị obi ha na ngwaahịa ndị ha na-eweta na tebụl. Ọ bụghị na-enweghị ya ọjọọ, ezie.
ọtụtụ ndị na-egbu egbu bụ naanị ndị nwere nnukwu ndị na-eso ya… mana ọ bụghị mgbe niile ka ha nwere ikike na ọnụọgụ ha. Aga m etinye onwe m na kọlụm ahụ. Ọ bụ ezie na m nwere nnukwu ndị na-eso ya, ndị na-eso ụzọ m ghọtara na m na-egosi ha ikpo okwu ka ha nwee ike ime nyocha ọzọ wee hụ ma ọ dabara. N'ihi ya, enwere m ike ịnweta ọtụtụ ịpị aka na onye nkwado ma ọ bụ njikọ njikọ… mana ọ bụchaghị ịzụrụ. Ọ dị m mma na nke ahụ, m na-anọkarịkwa n'ihu ndị mgbasa ozi na-abịakwute m maka mkpọsa ahịa influencer.
Enwere ọtụtụ ahịa ahịa nyiwe si n'ebe, ọtụtụ n'ime ha nnọọ mgbagwoju na mkpọsa ngwa, akaebe nke analytics, nsuso njikọ, wdg Dị ka onye influencer, M na-emekarị na-awụlikwa ndị a arịrịọ n'ihi na oge ọ na-ewe iji tinye na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-adịghị eru revenue ha. na-enye maka mkpọsa na-aga nke ọma. Houtgba mkpu dị nnọọ iche… naanị chọta mmetụta, kwụọ ụgwọ maka mkpu gị, wee hụ nsonaazụ ya. Shoutcart na-enye atụmatụ na uru ndị a:
Mgbasa ozi nwere ike ịgbatị - Shoutcart na-enye ikike ịtụ ụda mkpu site n'aka ọtụtụ ndị na-eme ihe n'otu oge. Zụrụ iti mkpu dị ka obere dollar ole na ole, yana ihe karịrị $10k n'otu oge.
Ndị na-eso igwe mmadụ - Wepụta ndị na-eso ụzọ site n'asụsụ, obodo, afọ, mmekọahụ na okike na-enye gị ohere ịhọrọ ndị na-eme ihe na-eso nke dabara na ndị na-ege gị ntị.
Ndepụta na metrics - Mkpesa mgbasa ozi na ọnụ ọgụgụ dị maka mkpọsa niile, chọpụta kpọmkwem ihe mmetụta na-eweta ROI kachasị, ma egbula mmefu ego gị.
Nnukwu Bang maka Buck gị - Ịre ahịa mmetụta dị ọnụ ala ma bụrụkwa eziokwu karịa ebe ọdịnala! Ị nwere ike ịmalite na Shoutcart na naanị $10!
Nyocha kwa ụbọchị - Shoutcart na-enyocha ndị na-eme ihe anyị kwa ụbọchị ka ị nwee ike nweta ozi doro anya gbasara onye gị na ya na-arụkọ ọrụ iji bulie nsonaazụ ya!
Shoutcart gụnyere ndị na-eme ihe sitere na Instagram, Twitter, YouTube, TikTok na Facebook.
Otu esi amalite mkpọsa Shoutcart nke mbụ gị
Ọ dịghị mkpa maka oku ire ere na nkwekọrịta, Shoutcart bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka ịzụrụ ụda olu mmetụta. Nke a bụ ka esi amalite:
Chọta ndị na-emetụta gị - Chọgharịa site na puku kwuru puku ndị na-eme ihe na Shoutcart, wee họrọ ole na ole dabara na niche gị ma ọ bụ onyinye gị. Ị nwere ike ịhọrọ site na otu, nha ndị na-ege ntị, ọnụọgụgụ ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ chọọ naanị site na isiokwu.
tinye na ụgbọ ibu - Mgbe ịhọrọchara ndị na-eme ihe kacha mma, tinye ha n'ụgbọ gị wee malite ịmepụta usoro!
Mepụta Order gị - Mejupụta ụdị dị mfe ma bulite onyonyo / vidiyo maka ndị na-eme ihe ka ha biputere. Tinye aha njirimara gị ma ọ bụ njikọ gị n'ime isiokwu ahaziri ahazi, ka ndị na-ekiri mara ka esi enweta onyinye gị.
Hazie na ugwo - Họrọ oge ị na-eti mkpu ma kwụọ ụgwọ maka ya. Kwe ka ihe ruru awa 72 maka ndị na-eme ihe ka ha bipụta usoro gị mana echegbula, ndị na-eme ihe agaghị etinye tupu oge masịrị gị.
Nata ngosi - Mgbe akwụchara ụgwọ mkpu gị na ịhazi ya, ị ga-enweta ozi sitere n'aka ndị na-eme ihe ị họọrọ! Ọ dị mfe otú ahụ!
Chọgharịa mmetụta na Shoutcart
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Houtgba mkpu yana onye mmetụta na netwọk ha.
Tags: zụta mkpọsa mgbasa ozi influencerzụta mkpuzụta mgbasa ozi mgbasa oziFacebookndị na-emetụta Facebookmkpọsa ịre ahịa influencerahịa ahịausoro ihe eji ere ahịainstagramndị na - eme ihe nkiriụgbọ mkpundị na-eme ihe nkiriTwitteryoutubendị na-emetụta youtube